127 ireo matin’ny valanaretina : olona efatra lavon’ny coronavirus | NewsMada
Mbola mampanahy tanteraka. Efatra ireo lavon’ny covid-19, omaly, araka ny tatitry ny CCO. Teto Analamanga ny telo raha any Boeny kosa ny iray. Tafakatra 127 izany izao ireo matin’ity valanaretina ity, hatramin’ny volana marsa no ho mankaty.
Tena miparitaka ny valanaretina
Etsy an-daniny, miisa 327 ireo nifindran’ny coronavirus ka avy eto Analamanga avokoa ny 272 amin’izany. Manom­boka mihanaka be any amin’ny faritra hafa koa anefa ny covid-19. « Tena efa miparitaka ny valanaretina na aiza na aiza », hoy ny mpitondra tenin’ny CCO, ny Pr Vololon­tiana Hanta. Anisan’izany ny any Boeny. Mahatratra 23 ireo tranga vaovao raha 15 ny any Matsiatra Ambony. Miisa sivy ny any Atsimo Andrefana ary samy ahitana tranga vaovao iray avy kosa ny any Vakinan­karatra, Analanjirofo, Atsimo Atsina­nana ary Anosy. Efatra kosa ny any Sava.
Miisa 84 ireo marary mafy…
Etsy an-daniny, miisa 84 ireo marary mafy ka maro anisa amin’izany ny eto Ana­lamanga, ahitana « forme grave » 67. Mitsinjara ho 39 etsy Befela­tanana raha 12 avy ny eny Anosiala sy HJRA. Efatra kosa ireo marary mafy eny Fenoa­rivo. Manampy ireo ny any Matsiatra Ambony miisa fito raha enina any Boeny ary efatra any Toliary.
Na izany aza, miisa 512 ireo sitrana ka tafakatra 9 798 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasahiranana. Miisa 12 222 ireo nifindran’ny valanaretina hatramin’izao raha 2 297 ireo mbola tsaboina sy arahi-maso ny fahasalamany.
Tafakatra 45 634 ny totalin’ny fitiliana PCR vita ary miisa 3 178 kosa ny fitiliana Genexpert.